नाम मात्रको लोग्ने – Sawal Nepal
१८ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०९:५६
हो सुलभ ! हाम्रो प्रेमको लागि यो कदम उठाउँदै छु । केही समयका लागि मेरो शरीर तिमीबाट टाढा भएता पनि मेरो मन सधैँ तिमीसँगै हुनेछ । हो, छोरी भएको नाताले मैले मेरा बाबुआमाको लागि भए पनि यो निर्णय लिनु नै पथ्र्याे । कारण हामी दुईबीचको चोखो प्रेमलाई यो समाजले स्विकार्दैन ।
हामीले हाम्रो प्रेमलाई के नाम दिएर समाजमा उभिन सक्थ्यौं र ? यो हाम्रो साँचो प्रेम भए पनि समाजले यसलाई पाप भन्छ । नौ वर्ष अगाडि विराटनगरको चोकमा तिमीलाई पहिलो पटक देखेकी थिएँ । अग्लो, मिलेको शरीर, चौडा छाती । सायद गेमबाट आएकाले पनि होला । कति सुहाएको थियो रेड कलरको टिसर्ट र ट्राउजर तिमीलाई ।
मेरो सपनाको हिरो जस्तै तिमी मेरो सामु उभिएका थियौ । तिम्रो त्यो नशालु आँखाले मलाई हेरिरहँदा म लाजले गलिसकेकी थिएँ । तिमी मेरै छेउबाटै जाँदा तिम्रो शरीरबाट निस्केर मेरो सोझै नाकमा ठोकिन आइपुगेका त्यो सुगन्ध, सायद मैले कहिल्यै भुल्ने छैन ।
हाम्रो पहिलो भेट मेरा लागि सबैभन्दा अविस्मरणीय दिन थियो । मेरो जन्मथलो विराटनगर, तिम्रो धरान । योभन्दा पहिला तिमीलाई देख्दै नदेखेको त होइन तर पनि आज जुन नजरले तिमीलाई देखें, त्यो सोझै मेरो मनलाई चोर्न सफल भएको थियो ।
‘म सुलभ, तपाईं ?’ तिम्रो पहिलो वाक्य थियो ।
‘म जिया ।’ कस्तो लाज लागेको थियो, आफ्नो नाम भन्न पनि मलाई !
साँच्ची सुलभ, जतिजति तिमीलाई जान्दै गइराखेको थिएँ । म झनझन तिम्रो नजिक हुँदै गइराखेको थिएँ । तिम्रा हरेक कुुराहरूले मलाई लट्ठ पार्दै गइराखेको थियो ।
सुलभ, दिनमा एक्लै बस्दा पनि तिम्रै नाम मात्र जपिराख्न मन लाग्न थालिसकेको थियो । कति नै भएको छ र हामी यति नजिक भएको पनि तर अब तिमी बिना बस्न नसक्ने पारिसकेका थियौ तिमीले । थाहा छैन, के जादु छ तिमीमा कि त्यसरी म तिमीप्रति यसरी आकर्षित हुँदै गइराखेको थिएँ ।
‘सुलभ, म अब तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ र सायद तिमी पनि म बिना । हाम्रो यो कञ्चन र पवित्र प्रेममा कसैको पनि आँखा नलागोस् । अब तिमी मेरो सबै थोक भइसक्यौ । मैले आज तिमीलाई आफ्नो शरीर पनि सुम्पिदिएको छु । अब यो शरीरको हक जमाउने तिमी मात्र हौ सुलभ ।’ म आफ्नो बेडमा छरिएका कपडाहरू टिपेर लगाउँदै उसको अनुहार हेर्छु ।
ऊ केही बोलिराखेको थिएन । ऊ सोफाको एक छेउमा टुसुक्क बस्यो । मायालाग्दो गरी । ‘तिमी सारै आकर्षक छौ मेरो प्रिय ।’ उसको चौडा छातीमा एउटा सानो रातो कोठी हेर्दै मैले भनेँ ।
‘तिम्रो नराम्रो भनेको केही छैन । तिमी जस्तो जीवनसाथी मैले पाउनु म आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु र मेरा बाबुआमा पनि तिमी जस्तो ज्वाइँ पाउनु, भाग्यमानी ठान्छन् ।’
‘अझ हाम्रो विवाह भएको छैन । याद छ कि छैन ?’ ऊ होटेलको झ्याल छोपेर उभिएका रङ्गीन पर्दाहरू खोल्दै भन्छ । कोठामा उज्यालो थपिन्छ । धरानको गर्मी, त्यसमा टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ बाहिर ।
‘भर्खरै चलेको ओछ्यानको न्यानोमै मात्र सीमित राख्ने भन्ने सोचेका छौ ?’ म जङ्गिन्छु ।
‘सुलभ, मैले हाम्रा बच्चाहरूको पनि नाम राखिसकेँ । ‘स्निग्धा र सुभान’ हाम्रा हुने बालबच्चाहरूको नाम ।’
‘जिया, तिम्रो त सुलभ अङ्कल हो । तिम्रो बुबाको सानीआमाको छोरा ।’ एक्कासी दिज्यूले दिनु भएको यो जानकारीले मुटुभित्रै पुगेको चिसो सुइरो भएर पोल्न थाल्छ । समालिन खोज्दाखोज्दै पनि अवाक बनाई दिन्छ यस परिस्थितिले । एउटा गहिरो निश्वास छाड्छु मानौँ बोल्नलाई केही शब्दहरू नै छैन जस्तो ।
एकैछिनमा सबै उथलपुथल भएको जस्तै । मानौँ हिरोसिमामा नभई मैकहाँ आएर पड्किएको जस्तो भइराखेको छ । किन आज नै दिज्यूसँग हाम्रो भेट हुनुपरेको होला । आँखाबाट आँशुका भेल थामिराखेको छैन । जसलाई मनबाटै मेरो सबै थोक मानिसकें । जसका लागि मङ्गलबारको व्रत बस्छु । तिमीबाट हजुर भइसकेको अवस्थामा किन र के हुन गयो आज ।
सुलभ, हजुरकै नामबाट टाउकोमा लुकेर सिन्दूर लगाउँथें र हातमा चुरा भने आज के भयो यस्तो ।
नजाने कुन साइतमा उसका ती भावुक र नशालु आँखासँग मेरो आँखाको मित्रता हुन पुगेथ्यो कुन्नि ? हरेक खाली समय उसलाई नियाल्दैमा बित्थे । मलाई देख्नासाथ आँखाले स्पर्श गरेर ओठमा काउकुती लगाउने मुस्कान छाड्न ऊ कहिल्यै बिर्संदैनथ्यो ।
यी सब हाम्रा प्रारम्भिक दिनदेखिका आजसम्मको सबै एकएक गरेर आँखाअगाडि घुम्न थालिराखेका छन् ।
सुलभ मेरो अङ्कल रे । बिहानसम्म ‘मेरो प्रिय’ भनेको मैले र ‘मेरो जानु’ भनेको सुलभले, के भोलिबाट पनि हामी यही सम्बोधनले एकअर्कालाई बोलाउन सक्छौँ होला त ?
‘प्रिय, प्रेममा सबै थोक जायज छ । प्रेम अन्धो हुन्छ, त्यसैले त भनेका हुन् नि ! बरु म आमाबाबु, इष्टमित्र केही भन्दिनँ । मलाई हजुर मात्र भए पुग्छ । मलाई यो समाजसँग केही लेनदेन छैन । कसलाई चाहिँ भन्न बाँकी राखेको छ र यो समाजले । म हजुरको लागि जे पनि गर्न तयार छु ।’ होटल क्यालरोनमा मैले यसो भन्दै गर्दा सुलभ टाउको झुकाएर बसिराखेको थियो ।
मलाई थाहा थियो, सुलभका लागि मेरो के महत्व थियो भन्ने ? मेरा लागि उसले उसकी आमालाई समेत छोड्न तयार हुन्छ भन्ने ।
‘दुई वर्ष अब सुलभ हामीकहाँ नै बसेर पढ्छ काठमाडौँमा ।’ मम्मीले भनिरहँदा मलाई यस्तो लाग्यो, म आकाशमा चरासँगै उडिराखेको छु जस्तो ।
मेरो राजा, मेरो सपनाका सन्तान स्निग्धा र सुभानका ड्याडी, मेरो सुलभ आउँदैछ । त्यो पनि काठमाडौँमा हाम्रै घरमा ।
अब बिहान उठ्ने बित्तिकै हजुरलाई हेरेर दिनको शुरुवात गर्न पाउने र हजुरलाई माया गरेर गुडनाइट भन्न पाउने भएँ ।
हो, घर र समाजमा काका भतिजी भएता पनि हामी जे थियौँ त्यो हाम्रो लागि अरूभन्दा अलग थियो र हामी यसैमा खुशी थियौँ ।
मलाई कैले पनि यो चुट्की सिन्दूरको ढोङ, जन्ती र बाजाको विश्वास लागेन र अब त झन छँदै छैन ।
मलाई ‘बुहारी’ भन्ने शब्द नै मन पर्दैन । म पढे लेखेको मान्छे, राम्रै ठाउँमा काम गर्छु भने किन म अरूको अन्डरमा बस्ने ?
अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर चौधौँ शताब्दीको विचार राख्ने मान्छेप्रति मलाई घृणा लाग्छ । सबैभन्दा ठूलो म, आफू खुशी हुुनुपर्छ र त्यसका लागि म जे पनि गर्न सक्छु ।
जुन कुरा गर्नदेखि घृणा लागेर आउँछ, त्यही कुरा बारम्बार सुनिरहनुपर्दा वाक्क लाग्छ मलाई । कहिलेकाहीँ त भनिदिन मन लाग्छ सबैलाई, ‘तिम्रो हुनेवाला ज्वाइँ मैले आजभन्दा नौ वर्षअगाडि नै खोजिसकेकी छु’ भनेर, तर विवश छु ।
हुँदाहुँदा आज सुलभलाई नै गएर भन्नुभएछ मम्मीले ‘जियालाई बिहे गर्न मनाउनु प¥यो ।’ बिचरा सुलभ भनोस् पनि के ?
‘जिया, हेर त विदेश बस्ने केटाको कुरा आएको छ । काठमाडौँमा नै बस्ने परिवार पनि सानो । मलाई हेर्दा ठीकै लागेको छ । आज यस केटाकी आमालाई पनि भेटेर आयौँ । अब तेरो के छ विचार ? कि सधैँ बिहे नगरी बस्छु भनेर भन्नुप¥यो, होइन भने एउटा निर्णय लिनुप¥यो ।’ मम्मीले मेरो अगाडि तीनओटा फोटोहरू राखेर भित्र जानुभयो ।
अहिल्यै सलाई कोरेर ती सबै फोटोहरू जलाई दिऊँ जस्तो लागेको थियो ।
सुलभलाई धेरै पटक भनेको पनि छु, ‘अब हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ । होइन भने हजुरकै अगाडि मलाई अर्कैको पल्ला भिडाई दिनेछन् । अनि हजुर लाटोले केरा हेरेको जस्तै हेर्दै बस्नू ।’
‘मलाई मात्र हजुरको साथ पाए म हजुरसँगै भाग्न पनि तयार छु’ भनेकी थिएँ । तर सधैँ सुलभ भाग्ने कुरामा हच्किन्थ्यो र सधैँ मैले पनि घरमा बिहेको कुरा पन्छाउन सक्दिनथेँ ।
यो बाजाका धुनले मेरो कान फुट्ला जस्तो भइराखेको छ । घरका सबैका अनुहारमा खुशी छाएको छ । तर म छैन, यो मेरो अगाडि उभिएको मान्छेलाई म लोग्ने कदापी मान्न तयार छैन ।
बाबुआमा रुन थाले । ‘गर्दिनँ भन्दाभन्दै कर गरेर बिहे गरिदियौ । अहिले चाहिँ रुँदै नाटक’ मनमनै भनेँ । सुलभलाई सम्झेँ, हाम्रा स्निग्धा र सुभानलाई सम्झेँ । डाँको छोडेर रुन मन लाग्यो ।
मायामा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्दै अर्काे चरणतिर खुरुखुरु प्रवेश गरें ।
‘आफ्नो मनको अदालतमा परास्त मान्छे दुनियाँको कुनै पनि न्यायालयमा विजय प्राप्त गर्न सक्दैन ।’ त्यसैले म हार्न हुँदैन । यो त पहिलो चरण मात्र हो । यस्ता अझै धेरै चरणहरू पार गर्दै हामीले देखेको सपनाको चुचुरोमा झन्डा गाड्नै छ ।
हुन त यसलाई विदेशमा नै प्रस्ट भनिसकेकी थिएँ, ‘जबसम्म मेरो मञ्जुरी हुँदैन तबसम्म मलाई छुन पाउँदैनौ ।’ हुन्छ त भनेको थियो तर हेर्दै डाँकु जस्तो छ के भर ।
‘आज हाम्रो सुहागरात ।’ भन्दै मेरो नजिक आएर थचक्क बस्छ ।
‘म कुमारी केटी होइन । मेरो अर्कै केटा छ । म अब चाँडै यो घरबाट जाँदैछु ।’ भनिदिएँ । मन हल्का हुन्छ ।
ऊ एकटकले मतिर हेरिरहन्छ । यसको हेराइ र अनुहारबाट सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु, मेरो वाक्यले नराम्रोसँग यसको हृदयलाई घोचेको छ । विचित्रको उदासीले भरिएको यसको आँखा एक्कासी राता भए । काला र नीलोतुथो जस्तो ओठहरू थर्थराउन थाले । मलाई के मतलब उता पल्टिएर सुतिदिएँ ।
‘जेसुकै होस्, मलाई किन नाटक गर्नलाई उठ्नु प-यो र नि यिनीहरूसँगै ?’ फेरि सुतिदिन्छु । ‘बिहान सात बजेसम्म सुतेर काम गर्ने दिदीले बेडमा दुई राउन्ड टी ल्याएपछि मात्र बेड छोड्ने म । हरेक दिन सके कल नै गरेर, होइन भने मेसेज नै भए पनि सुलभलाई गरेर मात्र दिनको सुरुवात गर्थें म ।’ ‘टिक्क राम्री भएर एरोबिक गर्न जान्थेँ म । त्यहाँ पनि एकसेएक केटाहरू हुन्थे । सबको नजर ममाथि हुन्थे तर पनि त्यस्ता झारेझुरेले कहाँ मलाई सक्थे नि ।’
राजा हजुर भनिसिन्छ, ‘एक महिना जति कुरौं’ तर मलाई यो हप्ता पनि कटाउन गाह्रो भइसक्यो ।
मैले हप्ता दिनमै यसलाई वाक्क पारिसकेकी छु । सायद आफै चाँडै फर्किन्छु जस्तो कुरा गरिराखेको सुनेकी थिएँ अघि । राजा, यो विदेशमा चाँडै गएमा हाम्रा योजना सफल हुनुलाई झन् सजिलो हुने भयो ।
राजा मेरो शरीर यो नर्कमा भए तापनि मेरो बाँकी सबै हजुरकैमा छ । म सुलभको मात्र हुँ ।
अरू दिनको तुलनामा यो आज खुशी देखिन्छ । मेरा आँखामा छाइएको खुसीले गर्दा पो हो कि यसलाई पनि खुसी देखेको मैले ।
कति खुशी छु आज म । नौ वर्षदेखिको हाम्रो सपना आज पूरा हुँदै छ । हतारहतार लुगा लगाएर भर्‍याङ ओर्लिन्छु ।
‘होइन, यसलाई थाहा त छ, जसलाई बिहे गर्न विदेशबाट आएर बिहे गरेकी स्वास्नी आज कहाँ जाँदै छ र के गर्न जाँदै छ भनेर पनि ?’ मनमनै सोच्छु ।
यो भर्‍याङमा बसेर मलाई हात हल्लाइराखेको हुन्छ । म चाँडोचाँडो गाडी चढेर आफ्नो सपना साकार पार्नतिर लाग्छु ।
अर्जुन थापा (समकालीन साहित्य डटकमबाट)